MagicHome Wi-Fi မှိန်စက်တပ်ဆင်ခြင်း (အတော်လေး) လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားသည် — MediaLight Bias Lighting
MagicHome Wi-Fi မှိန်စက်တပ်ဆင်ခြင်း (အတော်လေး) လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ထားသည်။
MagicHome မှိန်စက်တပ်ဆင်မှုသည် အချိန်၏ 90% တွင် အပြစ်ကင်းစင်သည်။ အခြား 10% အတွက်၊ သင့်ပြဿနာများအတွက် အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ခုခုကိုကြိုးစားပြီး ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများစွာကို လှည့်ပတ်ကြည့်မည့်အစား အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်ပြဿနာတိုင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြေရှင်းပြီး ထိုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးမှသာ ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားရာမှာ နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်မခံရအောင်၊ အောက်ပါအရာအားလုံးကို တစ်ချိန်တည်းလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် တစ်ခုခုကို မကြိုးစားပါနှင့်၊ ဆက်တိုက်ကျရှုံးပြီး နောက်တစ်ခုကို ကြိုးစားပါ။
ဤအဆင့်များ အဆင်မပြေပါက၊ သင့်အား မှိန်စက်အသစ်တစ်ခု ပေးပို့ပြီး စက်နှင့် ပြဿနာကို ဖယ်ရှားကြပါစို့။ အဆင်ပြေလား? အေးပါ!
အစားထိုး မှိန်စက်သည် သင့်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းပါက၊ သင့်ကွန်ရက်နှင့် အခြားပြဿနာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Router တစ်ခုသို့ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုထည့်နည်းကို သင်သိပါက၊ ဤနေရာတွင် အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် မိနစ် 20 အောက်တွင် အချိန်ယူရပါမည် (၎င်းတွင် router ကို ပြန်လည်စတင်ရန် အချိန်ခွင့်ပြုခြင်းလည်း အပါအဝင်)။
1) သင်၏ router ကို Reboot လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် မှတ်ဉာဏ်ယိုစိမ့်မှုနှင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းစေသည်။ Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ ပရင်တာတစ်လုံးထည့်ထားသူများစွာသည် ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်ဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ဖူးသည်။ Router ကို ပလပ်ဖြုတ်ပြီး ၁ မိနစ်လောက် အားကုန်သွားပါစေ။ ၎င်းကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုပါ။
2) router သည် 2.4GHz ချိတ်ဆက်မှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေကြောင်း သေချာပါစေ။ ကနဦးချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန် အချို့သော router များကို 2.4GHz မုဒ်တွင် ယာယီထားရှိရန် လိုအပ်သည်။ "အင်တာနက်အရာများ" စက်ပစ္စည်းအများအပြားသည် ၎င်းကို လိုအပ်သောကြောင့် router မီနူးအတွင်း ဆက်တင်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Eero ကဲ့သို့ mesh router များနှင့် (ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤအဆင့်ကို လျှို့ဝှက်စွာ ရပ်တန့်ထားသော်လည်း)။ MyWiFI-2.4 ကဲ့သို့ SSID (WiFi အမည်) ကို သင်တွေ့ပါက ၎င်းကို အသုံးပြုပြီး 5.7 ဗားရှင်းကို အသုံးပြုပါ။
3) သင့်ဖုန်းရှိ ဆယ်လူလာဒေတာကို ပိတ်ပါ။ ဒါကို ကျွန်တော် တစ်ခါမှ သဘောမပေါက်ဖူးပေမယ့် ဒါက လုံးဝ Airplane Mode ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် Wi-Fi စဖွင့်ခြင်းနှင့် ကွဲပြားသည်။ သင်သည် ဆယ်လူလာဒေတာကို ပိတ်လိုက်သောအခါ၊ WiFI မှ မှိန်စက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသောအခါ (အင်တာနက်သို့ မချိတ်ဆက်ရသေးသော) OS နှင့် အခြားအက်ပ်များကို cloud ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမှ တားဆီးပါသည်။ (ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါရှိပါမည်)
4) MagicHome အက်ပ်တွင် မှိန်စက်ကိုထည့်ရန် "လက်စွဲမုဒ်" ကိုသုံးပါ။ MagicHome အက်ပ်တွင် စက်ပစ္စည်းအသစ်များကို ရှာဖွေရန် အလိုအလျောက်မုဒ်ရှိသော်လည်း ပထမအကြိမ်တွင် အောင်မြင်မှုရရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးအတွက်၊ "လက်စွဲမုဒ်" ကို အသုံးပြုပါ။ (ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါရှိပါမည်)။ ၎င်းသည် ဘလူးတုသ်နှင့် ကွန်ရက်လုံခြုံရေးဆက်တင်များ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
5) ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှုတွင် မအောင်မြင်ပါက မှိန်စက်ကို အအေးဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ပထမအကြိမ် စမ်းသုံးခြင်းတွင် ပျက်ကွက်ပါက၊ dimmer hangup များကို ရှောင်ရှားရန်၊ USB port အတွက် ပါဝါအဆုံးကို ၃ ကြိမ် ဖြုတ်ခြင်းဖြင့် dimmer ကို စက်ရုံမုဒ်သို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်သင့်သည် (Adapter သည် မကြာခဏ အားသွင်းထားသောကြောင့် နံရံမှ ပလပ်နှင့် ဖြုတ်ခြင်းသည် မကောင်းပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်) မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ စက္ကန့် ၃၀ လောက် ပလပ်ဖြုတ်ထားလိုက်၊ အားသွင်းမှုအားလုံး ပြေပျောက်သွားအောင် လုပ်ပါ။ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းသည် တောက်တောက်တောက်တောက်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကောင်းတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် စက်ရုံမုဒ်တွင် ရှိနေသည်။
၆) "Ghost Dimmers" ကို သတိထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည် မှိန်စက်ကို MagicHome အက်ပ်တွင် ထည့်ထားသော်လည်း စက်ရုံထုတ် ပြန်သတ်မှတ်မှုကို ပြုလုပ်ရပါက၊ စက်တွင် အက်ပ်အတွင်း ထည့်သွင်းမှု အဟောင်းတစ်ခု ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သင်ချက်ချင်းဖျက်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း (သို့သော်လည်း၊ ဤသည်မှာ မကြာမီ ပြသမည့် ဗီဒီယိုဖြစ်သည်)၊ ဤစက်ပစ္စည်းထည့်သွင်းမှု နောက်တစ်ကြိမ် အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ လုံခြုံသောချိတ်ဆက်မှုသည် dimmer ၏ယခင်ဥပမာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် (စက်ရုံထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ)။ သင် မှိန်စက်ကို ထပ်ထည့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အက်ပ်နှင့် လုံခြုံသောချိတ်ဆက်မှုအသစ်ကို ညှိနှိုင်းပေးလိမ့်မည်။ ဤချိတ်ဆက်မှုအသစ်သည် မှိန်စက်အသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာပါမည်။ အဟောင်းစာရင်းကို မဖျက်မချင်း သင့်တွင် dimmer နှစ်ခုရှိပုံရသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူသောဖော်ပြချက်အတွက်၊ သင်သည် ဟိုတယ်တစ်ခုရှိ Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ အကောင့်ဝင်ရောက်ဖူးပါက၊ သင်အိမ်ပြန်သွားသည့်တိုင် သင့်သိမ်းဆည်းထားသောကွန်ရက်များအောက်တွင် ကွန်ရက်အမည် ရှိနေကြောင်း သတိပြုမိပေမည်။ ၎င်းကို သင်မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ၊ သို့သော် ၎င်းမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အလားတူ၊ MagicHome အက်ပ်သည် ယခင်ချိတ်ဆက်မှုများကို မှတ်မိသည်။ သို့သော်၊ မှိန်စက်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ၎င်းကို ယခုအခါ အသစ်စက်စက် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ရပြီး မှိန်စက်သည် တူညီသော်လည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုဟောင်းသည် ယခုအခါတွင် ghost dimmer ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်များ အဆင်မပြေပါက ထိုနေရာတွင် ရပ်ပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ စနေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး မှိန်စက်အသစ်တစ်ခု ပေးပို့ပြီး အခြားတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည်ကို အဖြေရှာကြည့်ကြပါစို့။